शहरी विकास योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण | Mechikali Daily
शहरी विकास योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: ५ माघ २०७५, शनिबार ०५:३९
तिलोत्तमा, माघ ५ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरको एकीकृत शहरी विकास योजना बनाउन थालेको छ । नगरपालिका दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरी विकास योजना बनाउन थालेको हो । यसैक्रममा योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा नगरपालिकाले सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुका साथै विभिन्न राजनीतिक दल, संघ–संस्थाका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश नं. ५ का प्रमुख सचिव तिर्थराज ढकालले कार्यान्वयन गर्न सकिने तरिकाले योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । संघ तथा प्रदेश सरकारले अघि सारेका योजनासँग तादाम्यता हुनेगरी स्थानीय सरकारले योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । यस्तै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले योजनामा स्थानीय आवश्यकता र बस्तुस्थितिलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नगर प्रमुख बासुदेब घिमिरेले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि भए÷गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी गराउँदै योजनबद्ध विशास निर्माणका लागि एकीकृत शहरी विकास योजना बनाउनु परेको बताउनुभयो ।